समाज खबर – Page2– rastriyakhabar.com
मुक्त कमलरीले अझै पाएनन् परिचयपत्र
कैलाली । सरकारले कमलरी प्रथा मुक्त घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमलरीले सरकारी परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । परिचयपत्र पाउन नसक्दा उनीहरु विभिन्न सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताइएको छ । सरकारले विसं २०७० असार १३ गते मुक्त कमलरी घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म पनि आधा बढी मुक्त..
ल्होत्से बहुउद्देश्यीयले थप्यो नयाँ बसपार्कमा ११ टिकट काउन्टर
काठमाडौं । काठमाडौंको गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कमा अग्रिम टिकट बुकिङका लागि ‘टिकट काउन्टर’ थप गरिएको छ । सरकारले भोलिदेखि दसैँमा घर जानका लागि लामो तथा मध्यम दूरीका बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेसँगै नयाँ बसपार्क सञ्चालन गरेको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले व्यवसायीको सहकार्यमा ‘टिकट काउन्टर’..
मलङ्गवा । सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवाका छुट्टाछुट्टै स्थानमा सातमहिने शिशु र एक युवकको शव फेला परेको छ । मलङ्गवा नगरपालिका–४ स्थित सार्वजनिक पोखरीमा सातमहिने शिशुको शव फेला परेको छ भने मलङ्गवा–७ गणेशियास्थित नहरमा अन्दाजी ४० वर्षीय एक युवकको बेवारिसे शव फेला परेको हो । आज बिहान करिब १०ः०० बजे..
तनहुँ । व्यास नगरपालिकाले स्नातक उत्तीर्ण गरेका बेरोजगार महिलालाई अनुदान दिन मापदण्ड पारित गरेको छ । नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा आज बसेको नगरपालिकाको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै फोहरमैलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न विभिन्न अनौपचारिक प्रस्ताव आइरहेको हुदाँ इच्छुक कम्पनी वा..
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई आज पीडित परिवारका आफन्त..
काठमाडौँ । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारमाथि जातीय छुवाछुत तथा विभेद गरेको आरोप लागेकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले एक लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले उनलाई धरौटी तिर्न आदेश दिएको हो । सरकारी वकिल..
संखुवासभा । संखुवासभा जिल्लाकाे मादी नगरपालिका–१ उम्लिङ खोला गाउँमा एकै घरका ६ जनाको हत्या गरेको अभियोगमा थप ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने घटनाका मुख्य योजनाकार ४७ वर्षीय खड्ग बहादुर कार्की, उनका छोरा २८ वर्षीय हस्त बहादुर कार्की, सोही..
२४ घन्टामा थपिए १०६६ संक्रमित, १६ जनाकाे मृत्यु
आइतवार, अशोज ३, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपालमा २४ घन्टाको अवधिमा १ हजार ६६ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् भने १६ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा देशभर ८ हजार ५४० आरटी पिसिआर र २ हजार ८१८ एन्टिजेन गरी कुल ११ हजार ३८५ जनामा परीक्षण गरिएकोमा १ हजार ६६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..
दैलेख । गुराँस गाउँपालिकामा एक शिक्षकको घाँटी रेटेर हत्या भएको छ । गाउँपालिकाको छोटेपोखरामा पढाउँदै आएका शिक्षक नगेन्द्र बिसीको गए राति घाँटी रेटेर हत्या गरिएको हो । प्रहरीले शंकास्पद दुई व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । गुराँस गाउँपालिका–८ छोटेपोखरास्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयमा पढाउँदै..
६ जनाको नरसंहार गर्ने लोकबहादुर ? आठ कक्षा पढेकोदेखि बैदेशिक रोजगारीसम्म
काठमाडौं । सङ्खुवासभा जिल्लाको मादी नगरपालिका १ उम्लिङका कार्की परिवारको नरसंहारमा संलग्न एक जना अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले छिमेकी २६ बर्षीय लोकबहादुर कार्कीले आफ्नै बन्धु परिवारको नरसंहार गरेको पुष्टि गर्दै पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्ने कार्कीले आफैले ६ जनाको नरसंहार..
के हो तिजको महत्व ?
प्रत्येक वर्ष भाद्रशुक्ल द्वितीया देखि पञ्चमीसम्म मनाइने तिज पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । केहीवर्ष अघिसम्म आर्यन र हिन्दू महिलाले मात्रै मनाउने तिज हिजोआज राजधानीका नेवार, गुरुङ, राई, लिम्बू लगायतका महिलाले पनि मनाउन थालेका छन् । असार–साउनको खेती..
तीजः मुख्य मन्दिर नखुले पनि पाशुपत क्षेत्रमा जान पाइने
काठमाडौं । हिन्दु नेपाली महिलाहरुको महान चाड तीजको आज महत्वपूर्ण दिन । आजको दिन ब्रत बसेर भगवान शिवको पुजा अर्चना गर्ने धार्मिक परम्परा रहेको छ । निरहार तथा फलहार ब्रत बसेका महिलाहरु दिनभरि भगवान शिवको पुजा आरधना गर्दै नाचगान गरी तीज मनाउँछन । आज देशभरका शिवालयहरुमा मेला लाग्ने गर्दछ । त्यस्तै आज..
१६ वर्षीया किशोरी बलात्कार आरोपमा नौजना पक्राउ
सुर्खेत । इलाका प्रहरी कार्यालय बाबियाचौर सुर्खेतले १६ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा नौजनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले बलात्कारको आरोपमा पञ्चपुरीका डम्बर वादी, गणेश वादी, युवराज शाही, खगेन्द्र भनिने शोभा शाही,..
महाकवि देवकोटाको घर यसरी मात्र भत्काउन सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश
सोमवार, भदौ १४, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेर मात्र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर भत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशको लिखित पाठ आउन बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता..
शुक्रबार, भदौ ११, २०७८ मा प्रकाशित
काठमाडाैं । सरकारले यही १४ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ । श्रीकृष्ण जन्माष्टमी परेकाले आउँदो सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ३ गतेको निर्णयानुसार मुलुकभर नै लागू हुने गरी बिदा दिइएको जनाएको छ..